Korona Fayras: baaritaan iyo raadinta dadka uu taabtay qof jirran | Fedasil info - informatieplatform voor asielzoekers in België
Korona Fayras: baaritaan iyo raadinta dadka uu taabtay qof jirran
Si loo yareeyo faafida cudurka korona fayras, waxaa muhiim ah in si dhakhso leh loo ogaado qofka qabto cudurka korona fayras iyo cidda uu qofka cudurka qaba uu dhowaan taabtay.
Haddii aad jirran tahay, aad leedahay astaamaha cudurka korona fayraska, dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad ayaa kaa baari doonna fayraska. Haddii natiijada baaritaanka ay tahay mid togan, waxaa muhiim ah in la ogaado cidda aad taabatay.
Raadraacida xiriirka waxaa ka sameeyo telefoonka shaqaale ka tirsan dawladda Biljimka.
Haddii aad joogto xarun qaabilaad, raadraacida xiriirka waxaa lala sameyn doonnaa shaqaale ka socda xarunta qaabilaadda.
Wadajir, waxaad u qori doontaa liiska magacyada dhammaan dadka kuwaasoo aad dhowaan taabatay. Ka fikir dadka aad la kulantay 2 maalmood kahor inta aadan astaamaha yeelan, tusaale ahaan xubnaha qoyskaaga, saaxiib aad isla lugeyseen, asxaabta iyo kormeereyaasha.
Shaqaalaha awladda ayaa wici doonna dadka aad taabatay (dadka kuwaasoo aad taabatay) waxayna ka waanin doontaa taxaddarrada ay tahay inay sameeyaan.
Sidee laguula soo xiriirayaa?
Shaqaalaha dawladda ayaa telefoon kaala soo xiriiri doonna (lambarka 02 214 14 19), fariimaha gaagaaban (lambarka 8811), warqad ama iimayl.
Miyaadan fahmeyn su'aalaha? Weydiiso caawimaad kaaliyaha bulshada ama shaqaale xarunta qabilaadda.
Waa u muhiim caafimaadka bulshada inaad iskaashi la yeelatid raadraaca xiriirka. Sidan, ayaad gacan uga geysan kartaa inaad yareyso faafida cudurka korona fayraska
Shaqaalaha dawladda ayaa u adeegsan doona macluumaadka aad bixisid si kalsooni leh.
Macluumaadka aad bixisid waxaa kaliya loo isticmaali doonnaa in talo la siiyo xiriiradaada.
Kaliya adeegga caafimaadka ee dawladda ayaa heli doonna liiskaaga xiriirka, ma helayaan shaqadaada, dugsiga, booliska, ama adeegyada kale ee dawladda.
Xiriirrada ku yaala liiskaaga ma maqli doonaan magacaaga. Waxaad sii ahaan doontaa qarsoodi.
Qofka soo wacaya xiriiradaada waxaa loo dhaariyey qarinta sirta. Xogtaada waxaa lagu keydin doonnaa keyd-xogeedka sugan ee dawladda.
Macluumaadka aad bixisid looma adeegsan doono in lagu xaqiijiyo u-hoggaansanaanta tallaabooyinka. Macluumaadka lala wadaagi maayo booliska ama adeegyada xakameynta.
Qiyaasaha fayraska corona Korona Fayras: ilaali naftaada iyo dadka kale Macluumaadka rasmiga ah ee ku saabsan cudurka korona fayras oo ku qoran luuqado… Talo ku socoto xiriiriyeyaasha (kadib raadraaca xiriir)